दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन बनाउन 'कोर्स करेक्सन' जरुरी
डा. नेत्र ज्ञवाली राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सरकारले २०६८ सालमै ग्रिड कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए पनि पाँच वर्षपछि मात्र गठन भएको कम्पनी विगत डेढ वर्षदेखि प्रसारणलाइन निर्माणमा सक्रिय छ ।
व्यापारघाटा कम गर्न कार्ययोजना तयार गरेका छौ
२०४६ साल साउनदेखि नेपालको प्रशासनिक सेवामा शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका चन्द्रकुमार घिमिरेसँग विभिन्न सरकारी निकायमा रहेर झन्डै तीन दशक काम गरेको अनुभव छ । सहसचिवका रूपमा उनले वाणिज्य मन्त्रालयमै रहेर लामो समयसम्म काम गरेका थिए ।
एक–दुई वर्षमा बिमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्छ
बिमा समितिले चुक्ता पुँजी बढाउन दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा केही कम्पनीले मात्र पुँजी पु¥याएका छन् । पुँजी नपुग्ने कम्पनीलाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने समितिको योजनालाई बिमा कम्पनीहरूले कसरी लिएका छन् ?
कस्ता छन् उपमहानगर ?
नेपालमा उपमहानगरपालिकाको संख्या ११ पुगेको छ । स्थानीय तह पुनसंरचना गर्दा उपमहानगरपालिकाको संख्या पुगेको हो । ग्रामीण परिवेश समेटेर बनेका ती उपमहानगरहरुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ८ मा मा उपमहानगर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न सूचकको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
शिवम सिमेन्ट आईपीओमा ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर पूर्वाधारजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने अग्रणी उद्योगपति हुन् । क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण र उत्खननसँग सम्बन्धित उद्योग, खाद्य तथा वनस्पति घिउतेल उद्योग, विद्युतीय तार तथा सोसँग सम्बन्धित मटेरियल्स र पीभीसी पाइपलगायतका उत्पादनमूलक उद्योगसँग उनी सम्बद्ध छन् । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित अन्य व्यापारमा समेत लामो समयदेखि उनी संलग्न छन् ।
अर्थतन्त्रको विकाससँग सामुदायिक वनलाई जोड्नुपर्छ
नेपालको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम आज विश्वमा नै एक सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको छ । यो मुलुकका लागि गौरवको कुरा हो । हिजोका नांगा पाखाहरूलाई समुदायले नै हरियाली बनाएका छन् । वन विकासका लागि सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय नै छ । हाम्रा यी सामुदायिक वन समुदायको आर्थिक समृद्धिका आधार हुन् ।
बहुदलपछि चिया प्रवद्र्धन ओझेलमा पर्यो
घरमा आएका पाहुन हुन् वा दुई मित्र एक्कासि भेट हुँदा होस्, सन्चो–बिसन्चोपछि सोधिने प्रश्न हो— चिया कालो खाऊँ कि सेतो ? नेपालको संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया कृषकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य श्रंखलामा घुमिरहँदा अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषिउपज हो । आफ्नो देशका नागरिकको माग पूरा गरेर निर्यातसमेत गर्ने सम्भवतः यो नै एकमात्र कृषिउपज हो ।
मौद्रिक नीतिले बैंकका समस्या समाधान गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थिर ब्याजदर र लगानीयोग्य रकमको सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थिर बनाउन स्प्रेड रेटमा ०.५ प्रतिशतले कमी गरेको छ भने ब्याजदर करिडोरको सीमा पनि साँघुरो बनाएको छ । त्यति मात्र नभई सीआरआर र एसएलआर घटाएर बेस रेटमा समेत कमी गर्न खोजेको छ ।
भू–क्षय, बाढीपहिरो नै भित्री मधेसको चुनौती
पर्शुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग वि.सं २०४९ मा तत्कालीन जोगबुढा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष निर्वाचित भई काम गरेको अनुभव छ ।
सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख
सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुराएर प्लेन उडेपछि छोडियो । उता, वीर अस्पतालका डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर आफ्नो अनुकूल गर्न भन्दै धम्क्याइएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।
स्मार्ट सिटी बनाउन यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ
रामलक्ष्मण नेपालले गर्व गर्नलायक युवा वैज्ञानिक हुन् । २०३७ मा नुवाकोटमा जन्मेका यी जुम्ल्याहा दाजुभाइले नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रविधि विकास गरी दैनिक जीवनयापनसँगै कार्यालयको कामकाजदेखि विभिन्न निर्वाचनको मतदान र गणनासम्मलाई सरल बनाएका छन् ।
आगामी आव स्थानीय सरकारको आधार वर्ष
संविधानले सबल स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जनताको नजिकको सरकार भएकाले यससँग नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका स्थानीय सरकारहरू कतिपयले कानुनको बर्खिलाप समेत गरिरहेका छन् ।
विकास र समृद्धिको उत्साह बजेटसँगै हरायो
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता भरतमोहन अधिकारी पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । नेपालको राजनीतिलाई सुक्ष्मरूपमा नियालिरहेका उनी संविधान निर्माणका पहरेदारसँगै समृद्धि र विकासका पक्षपाती नेताका रूपमा चिनिन्छन् । २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा अर्थमन्त्री बनेका उनले आफ्नो पालामा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने नारासहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ शिराबाट परिचित गराएका थिए ।
विदेशबाट ऋण लिन देशको रेटिङ आवश्यक छ
बजेटले आंकलन गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बैंक भने लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा कसरी गर्न सकिन्छ सुधार ?
नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १४ औं अनशनमा छन् । सरकारले भने यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा पेस गरेको विधेयक सर्वत्र आलोचनापछि फिर्ता लिएको छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित डा. केसीलगायतका चिकित्सक तथा अन्य सरोकारवालाहरू भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै ऐन नआए यो समस्या बल्झिरहने बताउँछन् ।